Solomona - Howling Pixel
Solomona mpanjaka, nataon'i Isaak Askenazy, taonjato faha-19.
Ny amin'ilay anarana
Ny anarana hoe Solomona na Sôlômôna na Salomona na Salômôna dia fanagasiana ny anarana amin'ny teny anglisy hoe Solomon na amin'ny teny frantsay hoe Salomon, ka ny hoe Solomon dia amin'ny teny grika hoe Σολομών / Solomon fa ny hoe Salomon dia avy amin'ny teny latina hoe Salomon. Izy roa ireo dia avy amin'ny anarana hebreo hoe שְׁלֹמֹה‬ / Shlômôh na Shelômôh. Aminny teny siriaka kosa dia ܫܠܝܡܘܢ‎ / Shlemûn; fa amin'ny teny arabo dia سُليمان‎ / Sulaymân, na Silimân na Slemân.
Araka ny Boky voalohan'ny Tantara (1Tant. 22.9) dia atao hoe Solomona/Salomona izy satria hitondra ny fiadanana sy ny fandriampahalemana (hebreo: shalom "fiadanana" na "fandriampahalemana") eo amin'ny tanin'i Israely. Ny dikan'io anarana io dia "ny Fiadanany", izay mampahatsiahy an'Andriamanitry ny Shalom, na ny "fahafenoana" na ny "fahatanterahana", izay tsy iainana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana.
Ny tantaran'i Solomona araka ny Baiboly
Ny fahazazan'i Solomona
Teraka tao Jerosalema i Solomona (1Tant. 14.4) ary zanaka faharoan'i Davida tamin'i Batseba, vady navelan'i Oria ilay Hitita miaramilan'i Davida ihany. Ny zokiny iray tampo aminy dia maty mba hanasaziana an'i Davida tamin'ny nanaovany izay hahafaty an'i Oria tany an'ady, satria notorontoronina tamin'ny fijangajangana fahavelon'i Oria. Taorian'ny nahazoan'i Davida famelan-keloka no nahaterahan'i Solomona. Nanana rahalahy telo iray tampo aminy voatonona anarana koa i Solomona, dia i Natana sy i Samoa ary i Sobaba ankoatr'ireo lehilahy zokiny miisa enina hafa reny aminy nateraky ny vady maron'i Davida (1Tant. 3.5).
Fiakarana eo amin'ny fanjakana
Rehefa antitra i Davida dia saika nanambara tena ho mpanjaka i Adonia nefa i Solomona ihany no lasa mpanjaka tamin'ny farany tamin'ny faha-40 taona nanjakan'i Davida. Nasain'i Davida nanosotra an'i Solomona (izay mbola 12 taona na 15) ho mpanjaka i Zadoka (na Sadoka) raha teo am-piandrasana ny fotoana hahafatesany i Davida sady namela hafatra tamin-janany (1Mpanj. 2.1). Mpanjakan'i Israely faha-3 i Solomona, taorian'i Saoly sy i Davida rainy.
Ny fahendren'i Solomona
Izao ny filazana momba ny fahendren'i Solomona ao amin'ny Baiboly, araka ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpanj. 5.10-14)
"10 Ary ny fahendren'i Solomona nihoatra noho ny fahendren'ny zanaky ny atsinanana rehetra sy ny fahendren'ny Egyptiana rehetra. 11 Fa hendry noho ny olona rehetra izy; eny, hendry mihoatra noho Etana Ezrahita sy Hemana sy Kalkola sy Darda, zanak'i Mahola, aza izy ary ny lazany efa niely tamin'ny firenena rehetra manodidina. 12 Nanao ohabolana telo arivo izy, sady nanao tonon-kira dimy amby arivo. 13 Ary nilaza ny amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera any Libanona ka hatramin'ny hysopa izay maniry eny amin'ny ampiantany izy, sady nilaza ny amin'ny biby sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka ary ny hazandrano koa. 14 Ary dia nisy tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hihaino ny fahendren'i Solomona, dia avy amin'ny mpanjakan'ny tany rehetra izay efa nahare ny amin'ny fahendreny."
Heverina ho ny tena hendry indrindra amin'ny olombelona rehetra i Solomona amin'ny fahaizany mitsara amim-pahendrena araka ny fangatahany tamin'Andriamanitra ny mba hanome azy fo mahay mihaino (2Tant. 1.7-12). Ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpanj. 3.16-28) dia tantaraina ny fifandirana nisy teo amin'ny vehivavy roa izay samy niteraka zazalahy izay avy. Ny zaza iray dia maty nandritra ny alina ka nitondra ny zaza sisa velona teo anatrehan'ny mpanjaka izy roa hahafantarana ny tena reniny. Nalaza izany fomba fitsarana izany.
Fandriampahalemana sy fandrosoana ara-toekarena
Tamin'ny fanombohan'ny naha mpanjaka an'i Solomona dia maro ireo fanoherana sy fikomiana niseho tao amin'ny fanjakany izay tsy maintsy natrehiny. Nataony izay hahafoana ireo mpiandany amin'ny rahalahiny Adonia ka ny mpisorona Abiatara nisesitany fa i Joaba kosa novonoina.
Nanararaotra ny fahafatesan'i Davida ny farao Siamona mba hanafika an'i Palestina ka nalainy sady nopotehiny ilay tanàna atao hoe Gezera. Nisafidy ny hanao fifanaraham-pilaminana anefa izy rehefa tonga teo anatrehan'ny tafik'i Solomona. Nomeny ho vadin'i Solomona ny zanany vavy iray ka ny tanàna Gezera no nataony fanomezana miaraka amin'izany. Tsy nanafika ny tanan'ny Filistina i Solomona. Nanao fifanarahana amin'ny farao Siamona i Solomona izay nahafahany namaritra ny sisin-tany atsimon'ny fanjakany izay mahafaoka an'i Gezera izay lasa ampahan'ny tanin'i Israely. Nandefa tafika tany amin'ny tany Hamata sy Zoba i Solomona mba hifehezany an'i Tadmora (Palmira) sy ny lalana falehan'ireo mpivarotra mandeha miaraka marobe mitaingina biby.
Nanjakan'ny fandriam--pahalemana sy ny firoborobon'ny toekarena ny fotoana naha mpanjaka an'i Solomona. Nanao fanorenana lehibe ny mpanjaka ka isan'izany ny Tempoly sy ny mandan'i Jerosalema. Izy no nanorina ny Tempoly voalohany tao Jerosalema tamin'ny faha efa-taonan'ny nanjakany ka vita izany tao anatinan'ny fito taona sy sasany. Voasolo tempoly ny tabernakely ka io no nanjary foiben'ny fanompoam-pivavahana azon'ny rehetra atrehina.
Ny fitantanan-draharaha nimasoan'i Solomona dia mahakasika ny raharaham-barotra indrindra. Nanohy ny fifandraisan-drainy tamin'ilay Foinikiana (na Fenisiana) Hirama mpanjakan'i Tiro. Nandefa iraka koa izy nankany Tarsisy sy Ofira (na Sofira) mba hifampiraharaha ara-barotra momba ny fanafarana volamena sy volafotsy sy vatosoa sy rajako sy vorombola sy zava-tsarobidy hafa koa (1Mpanj. 9.28; 10.11; 1Tant. 29.4; 2Tant. 8.18; 9.10; 1Mpanj. 22.48). I Solomona no nanan-karena be indrindra tamin'ireo mpanjaka nifandimby tao Israely, noho izany rehetra izany, araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly.
Araka ny Baiboly dia tafakatra teo amin'ny famirapiratany sy ny tanjany ara-toekarena ny fanjakan'i Israely nandritra ny 40 taona nanjakan'i Solomona. Tanatin'ny iray taona i Solomona dia nahangona volamena 666 talenta, izany hoe 18 125 kg (1Mpanj. 10.14).
Fifandraisany tamin'ny mpanjakavavin'i Saba
Araka ny Baiboly, rehefa nahare ny lazan'ny fahendrena sy ny haren'i Solomona ny mpanjakavavin'i Saba na Seba (hebreo: מַלְכַּת־שְׁבָא‬ / Malkat-Shəḇā) dia nanapa-kevitra ny hihaona aminy. Nitondra rameva novesarana fanomezana ny mpanjakavavy ka isan'izany ny volamena sy ny vatosoa ary ny zava-manitra fanao amin'ny sakafo. Nametra-panontaniana sy nanao ankamantatra tamin'i Solomona ny mpanjakavavy ka variana tamin'ny valin-ten'ny mpanjaka izay mampiseho fahendrena (1Mpanj. 10.1-13). Tamin'izany dia nomen'i Salomona azy ny zavatra rehetra niriny sy nangatahiny ka afa-po izy. (1Mpanj. 10.10). Izany fitantarana izany dia niteraka lovantsofina maro hafa koa ka isan'izany ny tantaran'ny mpanjaka tao Etiopia izay lazain'ny lovantsofina fa taranak'i Solomona tamin'ny mpanjakavavin'i Saba.
Ny fahalemen'i Solomona
Araka ny Baiboly, ao amin'ny Boky voalohan'ny Tantara dia nanana vady 700 sy vadintsindrano 300 i Solomona (1Tant. 11.3). Maro ny vehivavy tsy Israelita tamin'ireo vadiny ireo ka nisy ny Egiptiana, ny Moabita, ny Amonita, ny Edomita, ny Sidoniana, ary ny Hitita. I Naama, vehivavy Amonita, no voatonona anarana tamin'ireo vadin'i Solomona, io no renin'i Rehoboama, zanaka nandimby an'i Solomona teo amin'ny fitondrana (1Mpanj. 14.21-31; 2Tant. 12.13). Ny fanambadiany an'ilay zanaka vavin'ny farao dia nanamafy ny fihavanana ara-politika teo amin'i Solomona sy i Egipta.
Navelany hiriboroboteo amin'ny taniny ny fivavahan'ny Jentilisa nentin'ireo vadiny maro ireo (1Mpanj. 11.4-5) ka nisy ny nanorina tempoly ho an'i Astoreta (na Astarte) sy Moloka (na Moleka) (1Mpanj. 11.5; 11:33; 2Mpanj. 23.13). Tsy nanaja ny fanekena nifanaovana tamin'Andriamanitra i Solomona, dia ny tsy tokony hananany andriamani-kafa, ka niteraka ny fahatezeran'Andriamanitra izany (1Mpanj. 11.9-13).
Tamin'ny fiafaran'ny fanjakany dia naka hetra be loatra sy ny nampanao asa fanompoana i Solomona ka niteraka fanoherana izany izay niafara tamin'ny fizaran'ny fanjakana ho roa taorian'ny nahafatesany (taona 931 tal. J.K.), dia ny Fanjakan'i Samaria ao avaratra sy ny Fanjakan'i Joda ao antsimo.
Satria nalaza tamin'ny fananany fahendrena ny mpanjaka Solomona dia maro ny boky ao amin'ny Baiboly na ivelan'ny Baiboly izay heverina araka ny lovantsofina fa nosoratany na nosoratana tamin'ny anarany.
Boky ao amin'ny Baiboly
Ao amin'ny Baiboly dia ahitana boky heverina araka ny lovantsofina fa nosoratan'i Solomona. Hita ao amin'ny Baiboly kristiana rehetra sy ny Baiboly jiosy amin'ny teny hebreo (Tanakh) ny telo, dia ny Bokin'ny Ohabolana (hebreo: משלי / Míshlê) sy ny Tononkiran'i Solomona na Tononkira Fanaperana (hebreo: שיר השירים / Shir ha-Shirim) ary ny Bokin'ny Mpitoriteny (hebreo: קהלת / Qohelet). Ao koa ireo boky deoterokanonika izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Baiboly katolika sy Baiboly ortodoksa, dia ny Bokin'ny Ekleziastika na Fahendren'i Bena Siràka (hebreo: ספר בן סירא / Sepher ben Sira), ny Bokin'ny Fahendrena na Fahendren'i Salomona (grika: Σοφία Σaλωμῶνος / Sofia Salômônos ).
Boky apokrifa na pseodepigrafa
Maromaro ireo boky amin'ny anaran'i Solomona izay tsy voaray ho isan'ny Baiboly fa heverina ho apokrifa na pseodepigrafa na ho an'ny Kristiana na ho an'ny Jiosy, dia ny Antsan'i Solomona, ny Salamon'i Solomona, ny Testamentan'i Solomona ary ny Anganon'i Solimana.
Taranak'i Solomona ao Etiopia?
Araka ny tantara lovantsofina etiopiana izay nosoratana nanomboka tamin'ny taonjato faha-13 na faha-14  sady notaterin'ny Kebra Nagast, dia nanan-janaka tamin'ny mpanjakavavin'i Saba i Solomona: tsy iza izany fa ny mpanjaka Menelika I na Bäynä Ləhkəm min'ny fiteny gezy. Zanaka lahy voalohan'i Solomona izy sady mpandimby an-dreniny teo amin'ny fanjakana. Izy hono no nahatonga ny fanjakany hiova finoana ho amin'ny jodaisma. Araka io lovantsofina io dia nanana zanaka lahy roa hafa koa i Solomona tamin'ny vadiny roa hafa: i Rehobohama izay nandimby an'i Salomona, sy i Adramisy izay nanambady an'i Adlonia zanaka vavin'i Baltasara na Baltasora mpanjakan'i Bizantia na i Roma izay nodimbiasiny.
Izany fitantarana izany dia ahafahana hilaza ny fiaviana jiosin'ny kristianisma etiopiana sady ilazana ny fahambonian'izany kristianisma izany raha mitaha amin'ny jodaisma, na amin'ny lafiny ara-pivavahana na amin'ny lafiny politika sady koa ahafahana manao ny fampielezan-kevitra ho enti-manjakazaka amin'ny fanorenana ny maha efa ela azy sy ny fahefany.
I Solayman araka ny finoana silamo
I Solomona na Solayman dia isan'ireo mpaminanin'ny fonoana silamo. Ao amin'ny boky Kor'any dia ny soràta faha-27 no miresaka ny amin'i Solayman, izay sady mpaminany no mpanjaka sahala amin'i Davida (na Dawud). Voaresaka ao ny fifandraisany amin'ny mpanjakavavin'i Seba. maro koa ireo soràta izay miresaka ankolaka ny fitsapana sy ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy, nefa izany fahefana izany dia niseho, araka ny anganom-bahoaka, tamin'ny alalan'ny endrika mahagagan'ny tombokasen'i Solomona.
Araka ny Kor'any dia tsy mba isan'ny tsy mpino i Solayman ary tsy nahatonga ny fahatezeran'i Allah: "Ary [ny olona] nanaraka izay tantarain'ny devoly hanaratsiana ny fanjakan'i Solayman. Nefa tsy i Soayman na oviana na oviana no tsy nino fa ny devoly".
Fanjakan'i Israely (tsy mivaky)
Ny Antsan'i Salomona dia fanagonana tonon-kalo na tonon-kira kristiana miisa 42 tamin'ny fiteny siriaka (na angamba koa tamin'ny fiteny grika) nataona mpihira tsy fantatra tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha-2. Ny lahatsorara dia tokony ho nivoaka avy any Siria.
I Jerosalema dia tanàna any amin'ny faritra Kanaana nonenan'ny Jebosita tamin'ny Andro Taloha izay azon'i Davida mpanjaka ka nataony renivohitry ny fanjakany.
Rahefa nahazo fahaleovan-tena indray i Moaba dia resin'ny mpanjakan'i Israely Omry tamin'ny taonjato faha-9. Lasa mpanompon'ny Asiriana ny Moabita, sahala amin'ireo fanjakana manakaiky ny Fanjakan'i Jodà, tamin'ny taonjato faha-6 tal. J.K. Taorian'io dia nifangaro tamin'ireo vahoakan'ny firenena hafa ny Moabita ka tsy niavaka intsony.
I Nosy Solomona dia firenena ao Oseania.
Ny renivohiny dia Honiara. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. 28 400 ny velarantaniny ary
523 000 ny isam-poniny araka ny fanisana natao tamin'i 2009. Ny faritr'ora dia +11.
Ny Salamon'i Salomona na Salamon'i Solomona dia fanangonana salamo miisa 18 izay tsy isan'ny boky kanonikan'ny Baiboly jiosy. Ity boky ity dia nipoitra tao amin'ny Jiosy niaina tamin'ny taonjato voalohany tal J.K. izay nahita an'i Jerosalema renivohiny nidiran'ireo mpangeja romana. Hita ao amin'ny Septoaginta (na Septanta) io boky io nefa tsy hita ao amin'ny kanonan'ny Baiboly hebreo (Tanakh) araka ny soratra masoretika. Tsy tokony hafangaro amin'ny Antsan'i Salomona ny Salamon'i Salomona. Tsy isan'ny kanonan'ny Baiboly katolika sy Baiboly protestanta izy.